Soterre Qlik Sense အတွက်
MotioCAP - Cognos အထောက်အထားစိစစ်ခြင်း
IBM Cognos Analytics အတွက်
Load & Stress စမ်းသပ်ခြင်း
BI & Analytics ဘလော့
Motio Inc မှ
သင့်အဖွဲ့အား စဉ်ဆက်မပြတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အားသာချက်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်း
Motio ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောစီမံခန့်ခွဲမှု BI အလုပ်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်စေပြီးခက်ခဲသော BI ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုချောမွေ့စေရန်သင်၏ Analytic ကျွမ်းကျင်သူများကသူတို့၏ကောင်းမွန်သောအရာများအားအာရုံစူးစိုက်မှုပေးနိုင်ရန်စီးပွားရေးမန်နေဂျာများအတွက်တက်ကြွသောအသိဥာဏ်ကိုပေးအပ်သည်။
အထူးဂရုပြုရန် MOTIOCI ဝယ်သူ
၏အသစ်ဖြန့်ချိ MotioCI (ဗားရှင်း 3.2.10 FL9) ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
Log4j2 သို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အရေးကြီးသော Log2021j45105 အားနည်းချက်ကို CVE-4-2 ကို ဖြေရှင်းသည် v2.17 ။
ဤသည်မှာ ပြုပြင်ပြီးသည်နှင့် သုံးစွဲသူများသည် ဤအသစ်ထွက်ရှိထားသောဗားရှင်းသို့ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသည်နှင့် လျော့ပါးသက်သာစေရန် မလိုအပ်ပါ။ MotioCI. အကယ်၍ ဖောက်သည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်များကို လိုက်နာပြီးဖြစ်သည်။ KB ဆောင်းပါးလေးပါ။ပြဿနာများကို လျော့ပါးစေရန် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ လုံခြုံရေးသတ်မှတ်ချက်များသည် v.2.17 သို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒေါင်းလုပ် MotioCI 3.2.10 FL9 (Motio ဝဘ်ဆိုဒ်အကောင့် လိုအပ်ပါသည်။)
မှတ်ချက်- ၎င်းသည် အခြားမည်သည့်အရာကိုမျှ မထိခိုက်စေပါ။ Motio ဆော့ဗ်ဝဲ - Motioပိုင်, MotioCAP၊PersonalIQ၊ Reportcard or Soterre
Motio သင်၏ 3.2.10 FL9 သို့ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် သင့်အား စရိတ်စက မပါဘဲ ကူညီပံ့ပိုးရန် ဤနေရာတွင် ရှိပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် Motio ထောက်ပံ့.
Gitoqlok အတွက် ပရီမီယံပံ့ပိုးမှု အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း သင်သိပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည် ရုပ်ထွက်အရာဝတ္ထုများနှင့် ဒေတာများကို သင့်ဘရောက်ဆာသို့ တိုက်ရိုက်တင်သည့် scripts များကို ဗားရှင်းပြောင်းပေးသည့် Qlik Sense အတွက် အခမဲ့ပလပ်အင်ဖြစ်သည့် Gitoqlok ကို အသုံးပြုနေပါက၊ ထို့နောက် ပရီမီယံအကူအညီအတွက် စာရင်းသွင်းရန် သေချာစေပါ။ ၎င်းသည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Git နှင့် Qlik Sense အကြားကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးခြင်း။
သင်သည် Qlik Sense ဖြင့် ချောမွေ့သော အလုပ်အသွားအလာကို လိုချင်သည်။ မင်းအဲဒီကို ဘယ်လိုရောက်တာလဲ။
လိုက်နာမှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် သင်၏ Qlik Sense အတွေ့အကြုံကို အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ပိုမိုထိရောက်အောင် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို လေ့လာရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး သို့မဟုတ် အပိုအပိုဆောင်းကြေးများမပါဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် Qlik ကို မည်သို့လုပ်ရမည်ကို ရှင်းပြပါမည်။
မင်းရဲ့ BI အခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးချင်တယ်။ ဒီလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ webinars တွေထဲကတစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ကြည့်ရအောင်။
ပွဲစဉ်များနှင့် Webinars အားလုံးကိုကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ software ဖြေရှင်းနည်းများသည် TM1 မှ Cognos Analytics၊ Qlik နှင့် Planning Analytics တို့တွင် BI အောင်မြင်မှုရရှိရန်ကူညီသည်။
နှင့် Motioသင့်ဘက်မှ® software သည်သင်၏အလုပ်၌ထိရောက်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်၊ သတင်းအချက်အလက်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အရည်အသွေးနှင့်တိကျမှုကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ ပလက်ဖောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ စျေးကွက်သို့အချိန်ပိုရရှိခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ရရှိလိမ့်မည်။
IBM က Cognos Analytics မှ
Cognos အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကိုဖြေလျှော့ခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ ဗားရှင်းထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စမ်းသပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေခြင်း၊ CAP & SAML ကိုဖွင့်ပေးခြင်းနှင့် namespace ရွှေ့ပြောင်းခြင်း/အစားထိုးခြင်း
Cognos TM1 & Planning Analytics တွင်ဗားရှင်းထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အပြောင်းအလဲစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများ၊ ဖြန့်ကျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းစေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးအပြောင်းအလဲများကိုစီမံခြင်း။
အဲဒါကိုငါတို့ရဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲယူမနေပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်မည်သို့ပတ်သက်သည်ကိုဖတ်ပါ Motio သူတို့ကသူတို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလက်ဖောင်းတွေကိုပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်နဲ့ငွေကိုချွေတာပေးတယ်။
ဒေတာဖြင့် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ဖျက်ခြင်း။
ငြင်းဆိုချက် ဤစာပိုဒ်ကို မကျော်ပါနှင့်။ ဤအငြင်းပွားဖွယ် မကြာခဏ နိုင်ငံရေးရေထဲသို့ ဆင်းရန် တွန့်ဆုတ်နေသော်လည်း ကျွန်ုပ်၏ခွေး Demic လမ်းလျှောက်နေချိန်တွင် အတွေးတစ်ခုဝင်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် MD ဘွဲ့ရရှိပြီးကတည်းက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် အကြံပေးမှုပုံစံအချို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အတိတ်က...
Cognos Upgrade အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုသင်သိပါသလား။
နှစ်တွေ Motio, Inc သည် Cognos အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ "အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ" ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်အထည်ဖော်မှု ၅၀၀ ကျော်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များပြောသောစကားကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ် ဦး တည်းတက်ရောက်ခဲ့သူ ၆၀၀ ကျော်ထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် ...
Motio, Inc သည် Gitoqlok ကို ၀ ယ်သည်
Motio, Inc သည် Gitoqlok အားနည်းပညာအခက်အခဲများမပါဘဲခိုင်မာသောဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုကို စုစည်း၍ PLANO, Texas - ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက် Motioမင်းရဲ့စီးပွားရေးအသိဥာဏ်နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်မင်းရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားသာချက်ကိုဆက်ထိန်းပေးတဲ့ software ကုမ္ပဏီ၊ Inc.
ဒါဆို Cognos ကိုအဆင့်မြှင့်ဖို့သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။ ကဲဘာလဲ။
မင်းအချိန်တော်တော်ကြာရင် Motio နောက်လိုက်၊ ငါတို့က Cognos အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေကိုသူစိမ်းတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းသိလိမ့်မယ်။ (မင်းကသာအသစ်ဆိုရင် Motioကြိုဆိုပါတယ်။ မင်းကိုရလို့ငါတို့ဝမ်းသာတယ်) Cognos အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေကို“ Chip & Joanna Gains” လို့ခေါ်တယ်။ ကောင်းပြီ၊ နောက်ဆုံးစာကြောင်းကချဲ့ကားပြောနေတယ်၊
မကြောက်ရွံ့ပါနှင့်၊ လွယ်ကူသော Cognos အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်
CoBank ရှိအဖွဲ့သည်၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအစီရင်ခံခြင်းနှင့်အဓိကဘဏ္financialာရေးအစီရင်ခံမှုစနစ်အတွက် Cognos ကိုအားကိုးသည်။ Cognos အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်သူတို့၏အခြား BI tool များနှင့်စနစ်များနှင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဖွဲ့သည်“ My Content” space တွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာများကိုလက်တဆုပ်စာတိုးတက်နေသောစီးပွားရေးအသုံးပြုသူ ၆၀၀ နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Blog ကိုဖတ်ပါ
ဖတ် Motio ထုတ်ကုန်“ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ” BI အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများနှင့်အခြားအရာများ
ဘ‌‌လော့ခ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Analytics မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထောက်လှမ်းရေးCognos Analytics မှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု Motio ကလစ်ပါUncategorized
ရှင်းလင်းချက် ဤစာပိုဒ်ကို မကျော်ပါနှင့်။ ဤအငြင်းပွားဖွယ် မကြာခဏ နိုင်ငံရေးရေထဲသို့ ဆင်းရန် တွန့်ဆုတ်နေသော်လည်း ကျွန်ုပ်၏ခွေး Demic လမ်းလျှောက်နေချိန်တွင် အတွေးတစ်ခုဝင်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် MD ဘွဲ့ရရှိပြီးကတည်းက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် အကြံပေးမှုပုံစံအချို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျော်...
ဂျွန် Boyer | ဇန်နဝါရီ 17, 2022
ဘ‌‌လော့ခ်Cognos Analytics မှစက်ရုံအဆင့်မြှင့်တင်ပါအဆင့်မြှင့်တင်Cognos အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
Motio | အောက်တိုဘာ 14, 2021
သင်၏ BI & analytics ပလက်ဖောင်းများကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့်အလိုအလျောက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
ဒေါင်းလုပ် MotioPI Freeware ပါ။ သို့မဟုတ်တောင်းဆိုပါ MotioPI သို့မဟုတ် MotioCI သင်၏ Cognos Analytics upgrade ကိုအခမဲ့သုံးရန်
Plano, TX ၇၅၀၂၄
Toll Free: ၁ (၈၇၇) ၃၆၂-၈၇၀၈
© 2021 Motio။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး ● သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ● ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ